Andro: 5 Desambra 2019
Ny asa fanamboarana ny seranam-piaramanidina momba ny seranam-piaramanidina Siirt Vokatry ny asa fanamboarana ny 2019 / 575301 GCC ho an'ny fetra jeneralin'ny Vaomieran'ny Seranam-piaramanidina (TCDD) dia 22.205.909,39 TL ary ny vidiny dia 29.591.926,00 TL. [More ...]
Ny minisitra Turhan, Tale jeneralin'ny làlana (KGM) tamin'ity taona ity dia noho ny fanirian'ny vaotin-tsolika miady amin'ny oram-panala miady amin'ny ranomandry sy ny fanamboarana làlana. Torkia ny fitaterana faritra "Mialà ny kodia, ny fiara mandeha amin'ny" fanohizana ny fomba fiasa lalana [More ...]
TCDD 3. Araka ny fomban-drazana nataon'ny talem-paritry ny talem-paritra, dia nandray anjara ary nilalao amina sokajy 20 taranja baolina kitra karatra 52 nanomboka tamin'ny 21.11.2019 sy 02.12.2019 amin'ny İZBAN sy TCDD Liman Spor [More ...]
Ny fiara fitaterana ao Sakarya dia voapoizina ny fitaterana salama; Ny Sakarya Metropolitan Sakarya dia manohy ny fanadiovana ara-dalàna ny fiara fitateram-bahoaka. Ao anatin'ny fanambarana nataon'ny Dirtainn'ny Fitateram-bahoaka, [More ...]
Fomba vaovao no nampidirina tamin'ny kios Kart54. Amin'ity endri-javatra vaovao ity, Azo amidy amin'ny teboka famenoana ny karatra feno. 10 fanavahana ny tanàna amin'ny departemanta misahana ny fitaterana ao Sakarya Metropolitan [More ...]
Karamanoğlu Mehmetbey University dia haka mpiasa akademika; Karamanoğlu Mehmetbey University Rectorate amin'ireto rafitra manaraka ireto, ny 2547 dia nanisa ny lalàna momba ny fampianarana ambony sy ny fanendrena mpikamban'ny mpampianatra ary mifanaraka amin'ny lahatsoratra mifandraika amin'ny fitsipika. [More ...]
Tombontsoa tombanana ho an'ny Bursa Courthouse Junction; Ilay trano fitsarana vaovao, ny Science and Technology Center, ny Foiben'ny fampirantiana, ny tranoben'ny Departemantan'ny polisy ary ny Gökmen Space and Aviation Center izay amboarina. [More ...]
Taorian'ny fiaran-dalamby tao Istanbul, izay nentina tamin'ny fandaharam-potoanan'ny krizy sy ny lozam-pifamoivoizana dia nitodika tany amin'ireo tetikasan'ny metro nanerana ny firenena ny maso. CHP Mersin Munisipaly mitady findramam-bola amin'ny metro ao Bursa sy metro Kocaeli [More ...]
Ben'ny tanànan'ny Konya Metropolitan, Ugur Ibrahim Altay, nihaona tamin'ny mpikambana tao amin'ny mpanao gazety tao Konya nanao ny fandanjalanjana ny fandaharam-potoana. Ben'ny Tanàna ao amin'ny Konya Metropolitan Uğur İbrahim Altay, miaraka amin'ireo solontena mpanao gazety ao an-toerana sy nasionaly [More ...]
Ao anatin'ny gara Haydarpaşa fiaran-dalamby amin'ny fotoana voalohany; Ao amin'ny 2010, ny asa famerenana amin'ny laoniny Railway tany Haydarpaşa, izay nisy afo tao an-tafontrano ary simba, dia vita tanteraka. TRT sambany tamin'ny toeran'ny tranoben'ny station [More ...]
Mustafa Kocaman, Ben'ny tanànan'i Kartepe, dia nihaona tamin'ny lehiben'ny 32 tao amin'ny efitrano fivorian'ny kaominaly. Ben'ny tanàna Kocaman T Ny tetikasa ropeway kasaina haorina ao Derbent dia tetik'asa nokarakaraina sy nokarakaraina nandritra ny taona maro. [More ...]
Ny fandaharam-potoan'ny fiantohana fiara an-tserasera Bursa Uludağ Kabary fiasana ora sy ny fiaran'ny fiara amin'ny 2019; Ski manandratra Bursa, Torkia ny andalana voalohany ny tariby fiara. 29 Oktobra nosokafana tamin'ny 1963. Iray amin'ireo tandindon'ny tanàna ao Bursa [More ...]
Torkia miatrika fahafahana lehibe ao amin'ny bisikileta orinasa: e-bisikileta. Mitombo haingana ny fangatahana ho an'ny e-bisikileta, fantatra ihany koa amin'ny elektrika elektrikal mpandeha an-tongotra an-tongotra. Torkia nahoana e-bisikileta ao amin'ny mpamatsy lehibe indrindra amin'ny firenena Eoropeana [More ...]
Atolotry ny mpamily ..! Ny motolo-by 5-20 amin'ny motôlita ao Anatolian dia hikatona amin'ny volana Desambra; Izmit East Junction-Adapazari Junction amin'ny fizaram-paritany Anatolian any Ankara amin'ny lalana Ankara, noho ny asa fanamboarana sy fanamboarana ny sangan'asa 5-20 Desambra Desambra 08.00-18.00 [More ...]